Inkantolo izokhipha isinqumo ngelikaMadikizela-Mandela | News24
Inkantolo izokhipha isinqumo ngelikaMadikizela-Mandela
UMthatha – Inkantolo enkulu yaseMthatha isizokhipha isinqumo ngesicelo esifakwe uWinnie Madikizela-Mandela ngomuzi waseQunu, kubika iSABCnews.
Ngenyanga edlule, iqulu lamajaji lalilalele isicelo sakhe sokunikezwa amalungelo endlu yalo owayengumengameli wezwa eseQunu ngaphandle kwaseMthatha.
Abammeli bakaMadikizela-Mandela afake lesi sicelo ngokuhambisana nemithetho yesintu ethi uMadikizela-Mandela uyena mnini womuzi.
OLUNYE UDABA: Usebabele enkantolo uWinnie Madikizela-Mandela
Abammeli bakaMandela bayasiphikisa lesi sicelo ngokuthi umshado wephepha uwona ongaphezu komshado wesintu.
Kwincwadi yakhe yefa, uMandela wabhala ukuthi indlu eseQunu izohlala ngaphansi kwesikhwama somndeni iNelson Rolihlahla Mandela Family Trust ukuze isetshenziswe umndeni wakhe kanye nomfelokazi wakhe uGraça Machel nezingane zakhe.